Vaovao - fironana amin'ny jiro ara-barotra: fahaiza-miasa sy fahombiazana
taratry ny jiro
taratra fahazavana zaridaina
tariby nateraka tondra-drano
nitondra jiro avy amin'ny masoandro
namboarina jiro tionelina
Ny fironana amin'ny jiro ara-barotra: ny fahaizan'ny toetr'andro sy ny fahombiazany
Ny vanim-potoana niomerika dia tena revolisiona teo amin'ny tontolon'ny antsinjarany. Ny fisehoan'ny varotra elektronika dia mila fanovana fomba fiasa amin'ny famolavolana paikady ara-barotra. Amin'ity zava-misy vaovao ity, inona no andraikitry ny magazay ara-batana?
Ny habaka ara-barotra nentim-paharazana dia miatrika fanamby tsy mbola nisy toy izany: ny famoronana ny zavatra niainana izay tsy mitovy amin'ny fampiratiana sy fivarotana vokatra. Ny fanentanana ny fahatsapan'ny mpividy mety ho lasa fanao ifotony hisarika ny sain'izy ireo: Anisan'izany ny zavatra toy ny fofona, ny maripana ary ny jiro. Zava-dehibe ny antsipiriany.
Amin'io lafiny io, ny varotra maso dia maneho singa lehibe ao anatin'ny tontolon'ny fivarotana. Fitsipi-pifehezana izay mampivondrona ny psikolojia, ny marketing, ny endrika ary ny lafiny teknika, miaraka amin'ny tanjona hanentanana ny fanjifana amin'ny fotoana amidy nefa tsy hifantoka amin'ny soatoavin'ny marika.
Ny fiovan'ny toe-tsaina amin'ny jiro ara-barotra
Na eo aza ny maha-zava-dehibe ny varotra an-tserasera, ny fivarotana ara-batana dia manohy maneho ny fantsom-pivarotana tena ilaina noho ny fahafahan'izy ireo mifandray mivantana amin'ny mpanjifa. Ny habaka ara-barotra dia maneho ny votoatin'ny marika amin'ny alàlan'ny endrika amina namana mifanaraka amin'ny mpanjifa. Noho izany, ny jiro dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana ireo foto-kevitra antsinjarany vaovao. Ny tombony lehibe azo dia:
● Famoronana marika: Ny jiro izay natao mifanaraka amin'ny toetrany sy ny tanjon'ny marika dia hanampy amin'ny fananganana tontolo miavaka izay azon'ny mpanjifa fantarina koa.
● fanatsarana: Ny jiro dia tokony hanatsara ny singa aseho, fa ilaina ihany koa ny manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena amin'ny fotoana fivarotana. Ankoatry ny mason-tsivana mifandraika amin'ny fahombiazan'ny angovo, ny safidin'ny jiro tsara ho an'ny entana tsirairay aseho dia tokony ho ivon'ny paikadin'ny jiro tsara amin'ny toerana ara-barotra (akanjo, sakafo, fivarotana teknolojia sns.). Azontsika atao ny mampiasa loharano maivana miaraka amina spectrum hazavana manokana amin'ny alàlan'ny LED manokana hanatsarana ny loko fotsy, zavatra tena ilaina amin'ny fivarotana lamaody, na mampiasa alokaloka mazava kokoa toa ny loko mena mba hanatsarana ny fisehoan'ny hena, na ireo manga, izay dia tena ilaina hamoahana ny tsara indrindra amin'ny trondro.
● Fanamafisana: Ny famolavolana jiro ara-barotra dia afaka manolotra paikady hanentanana ireo habaka ara-barotra sy fampirantiana. Ny fampiasana jiro mavitrika izay manova ny mari-pana loko (CCT) arakaraka ny vanim-potoana amin'ny taona, ny alokaloka misy na koa ny andro amin'ny andro, dia mety tsara toerana dinamise. Ireo paikady ireo dia afaka manampy amin'ny fampandehanana ny fivezivezin'ny mpampiasa ao amin'ny magazay amin'ny tampon'ny fifamoivoizana, na ny mifanohitra amin'izay, manintona ny mpanjifa rehefa milamina kokoa ny magazay, mitovy amin'ny fomba fampiasan'ny singa hafa amin'ny neuromarketing, ohatra, ny mozika.
Ny famolavolana jiro ara-barotra mifanaraka amin'ny habaka tsirairay
Fanazavana ny faritra iraisana sy ny lalantsara
Amin'ny ankapobeny, ny hazavana amin'ireo faritra ireo dia manana fifantohana miasa, ao anatin'izany ny fomba fanaovan-jiro mety dia hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahatsapan'ny mpanjifa fampiononana ary noho izany amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny fividianana, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny traikefa ao amin'ny magazay. Amin'io lafiny io, ny fampifanarahana dia singa fototra ary noho izany, ireto manaraka ireto dia tsy maintsy raisina:
● Ny fampiasana toerana
Ny tsara indrindra dia ny fampifangaroana sosona hazavana fanamiana misimisy kokoa miaraka amin'ireo singa fanamafisam-peo mba hitarika ny sain'ny mpampiasa amin'ireo singa manokana.
Fandehanan'ny jiro amin'ny fivarotana
Ny varavarankely fivarotana dia singa iray manintona izay misy fiatraikany mahery vaika amin'ny mpampiasa, noho izany ny maha-zava-dehibe ny famolavolana jiro ho an'ireo toerana ireo, mba hiteraka singa iray manaitaitra sy mahasarika ny sain'ny olona.
Amin'ny fomba fijery ara-teknika, ny jiro am-baravarankely fivarotana dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiterahana miloko indrindra miaraka amin'ny Index Rendering Index (CRI) avo lenta. izay mamela ny fahatsapana marina ny vokatra nefa tsy manadino ny singa estetika. Zava-dehibe ihany koa ny fananana rafi-jiro miovaova sy azo ovaina toy ny luminaires amin'ny làlana, izay hanampy fahaizan'ny fametrahana azy, satria azo afindra izy ireo mba hifanaraka amin'ny fiovana endrika miseho amin'ny vanim-potoana samihafa. Ho fanampin'izany, ny fametrahana luminaires miaraka amin'ny ambaratonga flux sy optika hafa dia ahafahana mamorona vokadratsina bebe kokoa na kely kokoa amin'ny alàlan'ny filalaovana aloky ny hamafin'ny fahasamihafana arakaraka ny vokatra tadiavina, ka hiatrehana an'io hazavana io.
Rehefa manapa-kevitra ny fomba handrehitra magazay ianao dia zava-dehibe ny mifantoka amin'ireto tanjona manaraka ireto:
● Fanatsarana ny manintona ny vokatra. Luminaires izay mamela ny fitambaran'ireo modely samihafa dia safidy tena mahaliana. Ny fahaizan'ny fametrahana azy ireo dia ahafahana mampifanaraka azy ireo amin'ny varotra hita maso samihafa
● Mitantana ny mpanjifa amin'ny habakabaka ary manome azy ireo aina. Ny paikady jiro mahomby dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny dian'ny mpanjifa marika, izany hoe ny dingana lalovan'ny mpanjifa alohan'ny ahazoana vokatra na serivisy. Amin'ny tontolon'ny nomerika vaovao, mety hanomboka amin'ny vavahady an-tserasera ity dia ity, ka tena ilaina ny fampidirana fantsona. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny hamafin'ny fluxes mamirapiratra na ny mari-pana amin'ny loko ampiasaina, dia azontsika atao ny mitarika ny mpanjifa mankany amin'ireo teboka mahaliana izay heverin'ny marika fa mifandraika indrindra ao anatin'ny traikefa fiantsenana manerantany amin'ny fomba tsotra sy voajanahary.
● Fantaro ny faritra samihafa sy ny habaka ara-barotra. Ny rafi-pitantanana jiro manan-tsaina dia tombony lehibe, ahafahan'ny fiovaovan'ny jiro hamboarina avy amin'ny fitaovana nomerika tokana mifanaraka amin'ny filàna manokana, tsy mila manolo luminaires na singa hafa amin'ny fametrahana. Adaptability no lakilen'ny famolavolana sy ny fitehirizana vola.
Ao amin'ny Lamp, manana traikefa be izahay miaraka amin'ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny tetikasa jiro ara-barotra. Amin'ity sehatra ity dia manampy ny tetikasa tsirairay izahay amin'ny alàlan'ny famolavolana vahaolana hazavana natao ho an'ny rindrambaiko tsirairay.
Mahafantatra Photometric Light Analysis Pla ...
Fironana amin'ny jiro ara-barotra: Versatilit ...
Jiro ivelany: fironana 3 izay revol ...
Adiresy: NO.37 Rongchuang Road, Mingwei Cun, lizhou street, Yuyao City, Zhejiang China.